Amaqhinga okwenza mhlophe amalunga ethayela | Bezzia
Amaqhinga okwenza amalunga ethayela abe mhlophe
UToñy Torres | 12/05/2022 10:00 | Ikhaya
Ukuhlanza ikhishi noma izindlu zangasese ngaphandle kokwenza mhlophe amalunga ethayela kucishe kufane nokusebenza kanzima ngaphandle komvuzo kamuva. Ngoba iqiniso liwukuthi ekuqaleni, uma amajoyinti engekho mhlophe kubonakala sengathi ama-tiles angcolile. Ukuyixazulula akudingekile ukuthi wenze imisebenzi emikhulu, noma ucabange ukushintsha amathayili ukuze ujabulele ukubona yonke into entsha futhi ecwebezelayo.
Kufanele nje usebenzise imikhiqizo efanele futhi ulandele amathiphu afana nalawa angezansi. Futhi ngomzamo omncane ungashiya lawo malungu amhlophe qwa. Ukuthi, nakuba sazi ukuthi akubalulekile, kunikeza ukuthula kwengqondo okuncane kuleyo ndawo ebaluleke njengekhaya ngokwalo.
1 Amhlophe kanjani amalunga wethayela
1.1 Amanye amaqhinga
Amhlophe kanjani amalunga wethayela
Kunemikhiqizo eminingi ethile emakethe yale njongo futhi uma udinga ukwenza amalunga amnyama kakhulu abe mhlophe, ngesikhunta noma indawo engazange ithole ukunakwa okuningi, kungcono ukusebenzisa enye yazo. Manje, uma ukungcola emajoyini we-tile kuvamile ekusetshenzisweni, ngenxa yomswakama ezindaweni zokugezela, ngenxa yamafutha aqoqa ekhishini, njll. okungcono kakhulu i-ammonia namanzi.
Ngaphambi kokuba uqale kufanele uzivikele ngoba i-ammonia inamandla kakhulu. Gqoka imaski ukuze ungahogi intuthu. futhi ufake amagilavu ​​enjoloba ukuze ungalimazi izinzipho nezandla zakho. Ukuze uthole ingxube uzodinga indishi enamanzi ashisayo kanye ne-splash ye-ammonia. Uma uzibuza ukuthi zibalwa kanjani izilinganiso, kungaba ngaphezulu noma ngaphansi kwe-ammonia kuwo wonke amanzi ayi-10.
Sebenzisa ibhulashi elide elinama-semi-hard bristles ukususa ukungcola okuningi ngangokunokwenzeka. Ngaleli thuluzi ungakwazi ukuhlanza amalunga amathayili ngesikhathi esifanayo nendawo ngokwayo. Isebenza kahle ezindaweni ezingcolile kakhulu noma lapho kukhona isikhunta ukuze kukhishwe izinhlamvu eziyingozi nama-bacteria. Bese wedlulisa indwangu efakelwe amanzi ashisayo ukuze ususe ukungcola. Uma ufuna ukususa amaconsi amanzi, ungawasula ngendwangu ehlanzekile, eyomile futhi azocwebezela futhi ahlanzeke.
I-Amoniya ayinangqondo, kodwa akuwona kuphela umkhiqizo ongawusebenzisa ukuhlanza amalunga ethayela. Ekhaya ungathola ezinye izixazululo ezifana nalezi ezilandelayo.
nge-bleach: Isibulala-magciwane esingcono kakhulu, nakuba siyingozi empilweni. Nge-bleach ungakwazi ukwenza mhlophe amalunga ama-tile futhi uwabulale amagciwane ngokuphelele. Ukuze ufinyelele kahle kulawo makhona anzima ungasebenzisa isifutho lapho kuzodingeka wenze khona hlanganisa amanzi (ahlala ebanda) nengxenye ye-bleach.
Umuthi wokuxubha: Inhlanzi yamazinyo yendabuko iphinde ibe isihlanzi esinamandla samalunga ethayela. Yebo, sebenzisa eyodwa eklanyelwe ukwenza amazinyo abe mhlophe, njengoba aqukethe i-bicarbonate, okuwumkhiqizo ozowenza abe mhlophe amalunga. Kulokhu, sincoma ukusebenzisa isixubho esidala ongasihlikihla kahle ezindaweni ofuna ukuzenza zibe mhlophe. Kukhona okukhandla kakhulu, kodwa okusebenzayo ngokulinganayo.
Uviniga omhlophe nesoda yokubhaka: Isihlanzi esingcono kakhulu nesibulala amagciwane ongasisebenzisa kunoma yiliphi ikhona lendlu yakho. Asikhathali ukukusho futhi kusuke kunjalo ukuhlanza uviniga Kanye ne-bicarbonate, bakha imishini engcono kakhulu yokubulala amagciwane emakethe. Kushibhile, kulula ukukuthola, imvelo futhi okubaluleke kakhulu, kusebenza kahle kakhulu. Lungiselela isitsha esine-diffuser esinamanzi ashisayo, uviniga omhlophe nesoda yokubhaka. Fafaza emalungeni bese ukhuhla ngesixubho esidala. Leli khambi liwusizo ikakhulukazi emalungeni amnyama kakhulu futhi aneminonjana yokukhunta.
Nganoma yimaphi alawa maqhinga ungawenza abe mhlophe amalunga ama-tile futhi uwashiye ehlanzekile futhi engenamagciwane. Ukuze ugweme ukunqwabelana kokungcola ngokweqile kanye nokuchitha isikhathi esiningi ukuhlanza, kungcono ukwenza isibuyekezo njalo njeLokhu kuzoyivimbela ukuthi inganqwabelani. Nakuba uhlanza amathayili njalo, izinto ezinama-porous zisetshenziswa emajoyini lapho kulula khona ukuthi isikhunta sande ngenxa yomswakama. Ngokunakekelwa okuncane, ungazigcina zihlanzekile futhi ziphelele isikhathi eside.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Amaqhinga okwenza amalunga ethayela abe mhlophe
Izinyathelo ezinhle kakhulu zokudala eyakho 'I-Gallery Wall'
Iyini i-toxoplasmosis futhi ithinta kanjani ukukhulelwa?